I-15 yezandla ezilula zaBantwana | Imisebenzi yezandla
I-15 yezandla ezilula zaBantwana
Isabel Catalan | 05/10/2021 09:00 | Imisebenzi yezandla, Imisebenzi yezandla zabantwana
Ngaba abantwana bayadika ekhaya kwaye abazi ukuba mabenze ntoni ukuze wonwabe? Kwiposi elandelayo uya kuyifumana 15 yezandla ezilula for kids Zenziwe ngejiffy kwaye banokonwaba ngazo zombini kwinkqubo yokudala kwaye kamva, xa begqibezela ubugcisa kwaye banokudlala nayo.
Ukwenza obu bugcisa awuzukufuna ukuthenga izinto ezininzi. Ngapha koko, ukuba ungumthandi wezobugcisa, ngokuqinisekileyo uya kuba nazo ezininzi ekhaya ukusuka kwizihlandlo ezidlulileyo, nangona ungasebenzisa izinto ezinokuphinda zisetyenziswe ukuzenza. Sukuphoswa yiyo!
1 I-superhero elula eneentonga zobugcisa kunye nekhadikhadi
2 Felt iphazili yabantwana
3 Umqondiso wokuphatha ucango ngomyalezo
4 Umhlobiso we-Christmas reindeer wokwenza nabantwana
5 Ukurisayikilisha ubugcisa beKrisimesi. Umntu weqhwa
6 Ikhonkco lekhadibhodi yokwenza nabantwana
7 Ibhanki elula yehagu yokurisayikilisha ibhotile yobisi olungumgubo okanye efanayo
8 Iimilo zejiyometri zokuba isitampu, senziwe ngemiqolo yephepha langasese
9 Ikhadibhodi kunye nebhabhathane lephepha le-crepe
10 Ipeni yomququzeleli wabantwana
11 Iingxowa zamalaphu zokuthambisa iikhabhathi
12 Iislippers ezihonjisiweyo zehlobo
13 Iithoyi ezihlaziyiweyo: ifluti yomlingo
14 Ikati yomgcini wepensile
15 Umdlalo wehupula
Phakathi kwezinto zobugcisa ezilula zabantwana unokufumana oku kulula i-superhero eyenziwe ngeentonga kunye nekhadibhodi. Izinto oza kuzifuna yintonga yepopsicle, ikhadibhodi kunye nommakishi onemibala.
Into emnandi ngale mveliso kukuba ungayenza ngemizuzu embalwa kwaye abantwana baya kuba nakho ukudlala nayo. Ukongeza, inokwenziwa ibe yeyomntu ngokukhetha imibala kunye nonobumba we-superhero kunye negama lomntwana, umzekelo.
Ukuba ufuna ukwazi ukuba ungayenza njani, ungaphoswa sithuba i-superhero eyenziwe ngeentonga kunye nekhadibhodi.
Omnye wemidlalo oyithandayo yokuba abantwana bonwabe ziipuzzle, ukusuka kweyona incinci ukuya kwezona zinzima. Iiphazili ezenziwe ngamalaphu afana nokuziva zilungele ukusebenza kwizakhono zemoto kunye nezivamvo, ezilungele abantwana ukuba bakhulise amandla abo okuqonda kunye nawomzimba.
Kwakhona, le puzzle kulula ukuyenza kwaye ungenza zonke iintlobo zamanani onokuhombisa ngazo. Uzakufuna ilaphu elivelweyo, intambo yokuhombisa, inaliti eshinyeneyo kunye ne-velcro yokuncamathelisa, phakathi kwabanye.
Ukuba ufuna ukufunda ukuba ungayenza njani inyathelo ngenyathelo, bona iposti Felt iphazili yabantwana.
Umqondiso wokuphatha ucango ngomyalezo
Le yenye yezinto ezilula ezenziwe ngabantwana onokuzenza ngezinto ezimbalwa osele unazo ekhaya ezinjengekhadibhodi enemibala, iphepha le-crepe, isikere, iglu neziphawuli.
Ngazo zonke ezi zixhobo unokwenza oku uphawu lomyalezo oxhonyiweyo ezinqeni zamagumbi endlu. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ungayenza njani? Jonga iposti Umqondiso wokuphatha ucango ngomyalezo.
Umhlobiso we-Christmas reindeer wokwenza nabantwana
Ukongeza ekubeni yenye yezinto ezilula kubantwana, ikwayenye yezona zinto zibhetyebhetye kuba inokusetyenziswa njenge Umhlobiso womthi wekrisimesi okanye njengekhadi lokubulisa lomntu othile okhethekileyo ngale mihla.
Ilula kakhulu kangangokuba nelona lincinci losapho linokuthatha inxaxheba kumalungiselelo alo. Ukwenza oko kuya kufuneka kuphela isiqwenga sekhadibhodi, ipensile, isiphawuli esimnyama, ezinye iibhola ezinemibala kunye nezinye izinto onokuzibona eposini Umhlobiso we-Christmas reindeer wokwenza nabantwana.
Ukurisayikilisha ubugcisa beKrisimesi. Umntu weqhwa
Enye yezona zinto zipholileyo zipholileyo kubantwana kwaye ziqhelekile kumxholo weKrisimesi onokuyenza ikhadibhodi indoda yekhephu.
Uya kudinga amanye amaphepha angenanto, irabha yegwebu, iipom pom, waziva, amakishayo, kunye nezinye izinto ezimbalwa. Isiphumo sihle kakhulu, nokuba kukuhombisa igumbi labantwana okanye ukulisebenzisa njengezinto zokudlala ukuzonwabisa okwexeshana.
Ukuba ufuna ukubona onke amanyathelo wendlela yokwenza, ungaphoswa ngumyalezo Ukurisayikilisha ubugcisa beKrisimesi: uSnowman. Ngokuqinisekileyo iya kujongeka intle kuwe!
Ikhonkco lekhadibhodi yokwenza nabantwana
Le nkumba incinci yenye yezona zinto zikhawulezayo kulula ukuzenza. Kulungile kubantwana abancinci ukuba bafundele ukwenza ubugcisa ngokwabo kwaye babe nexesha elimnandi kakhulu lokuphuhlisa ukucinga kwabo.
Izinto eziphambili zokwenza le nkumba yikhadibhodi. Ngokuqinisekileyo unabaninzi ekhaya! Ngaba uyafuna ukubona ukuba ungazenza njani? Kwiposi Ikhonkco lekhadibhodi yokwenza nabantwana uya kufumana yonke le nkqubo.
Ibhanki elula yehagu yokurisayikilisha ibhotile yobisi olungumgubo okanye efanayo
Ngoku xa kuqala unyaka omtsha lixesha elifanelekileyo lokufundisa abantwana ukuba bonge imali yabo ukuze bakwazi ukuthenga izinto zokudlala kunye nezinto zokudlala unyaka wonke.
Indlela emnandi yokwenza oku kukudala le ibhanki yeehagu ngebhotile yobisi olungumgubo olwenziwe ngokutsha. Yenye yezandla ezilula zabantwana oya kuthi ufune izinto ezimbalwa: isikhephe, uboya obuncinci, umsiki kunye nesilicone eshushu.
Ukuba ufuna ukwazi inkqubo yokuvelisa yale piggy bank, ungaphoswa yile post Ihagu elula yebhanki yokurisayikilisha uhlobo lomgubo wobisi olunako.
Iimilo zejiyometri zokuba isitampu, senziwe ngemiqolo yephepha langasese
Ngaba uyafuna ukunceda abantwana ukuba bahombise izixhobo zabo zesikolo ngendlela emnandi kunye neyasekuqaleni? Emva koko jonga iposti Iimilo zejiyometri zokufaka isitampu ngemiqulu yephepha langasese kuba yenye yezinto ezilula kubantwana onokuthi uzenze ngokukhawuleza kunye nezinto ezimbalwa onazo ekhaya. Uzakufuna kuphela amakishayo, ezinye iibhokisi zephepha langasese kunye nezinye iincwadana.
Enye yezandla ezilula zabantwana onokuzenza ngekhadibhodi encinci, iphepha le-crepe, amakishayo kunye neglue yile ikhadi lebhabhathane lephepha kuhle kakhulu. Ayithathi ixesha elide ukuyenza kwaye kwangoko uya kuba nomhombiso omncinci onokuhombisa ngawo igumbi labantwana.
Ukwazi ukuba ungayenza njani jonga kwiposti Ikhadibhodi kunye nephepha lebhabhathane lephepha apho iza ichazwe kakuhle inyathelo ngenyathelo.
Abantwana bathambekele ekuqokeleleni isixa esikhulu seekhrayoni, iipensile kunye neempawu zokumakisha ukuze ekugqibeleni kuphele kujikeleza indlu. Ukubathintela ekulahlekeni kwaye babe nayo yonke imizobo kwindawo enye, zama ukwenza oku Ipensile yabantwana yomququzeleli wepensile.
Nazi ezinye zezona zinto zimnandi kwaye zinemibala ezilula ezenziwe ngabantwana. Ukongeza, iya kukuvumela ukuba uphinde uphinde uphinde usebenzise izinto esele unazo ekhaya endaweni yokuzilahla.
Ukuba ufuna ukwazi ukuba ubenza njani obu bugcisa, ungaphoswa sithuba Ipensile yabantwana yomququzeleli wepensile.
Iingxowa zamalaphu zokuthambisa iikhabhathi
Ezi iingxowa zelaphu zokuqhumisa iikhabhathi Yenye yezobugcisa ezilula ebantwaneni, ukongeza ekunikezeleni abantwana ixesha elimnandi, iyakusebenza njengesiqhelo sokuhlaziya umoya kwimpahla, eya kuthi ithintele iimpahla ekufumaneni ivumba kunye nokufuma.
Zinemibala, ziyasebenza kwaye zilungele izipho. Ngayo loo mva kwemini unokwenza ezininzi ngelaphu elincinci, iintyatyambo ezomisiweyo kunye ne-lavender okanye isinamon essence. Ukwazi ezinye izinto zokwenza lo msebenzi wobugcisa, ndincoma ukuba ufunde iposti Iingxowa zamalaphu zokuthambisa iikhabhathi. Kuya kuba luyolo ukuvula iikhabhathi!
Hombisa iiteki ezimhlophe ezinophawu yenye yezona zinto zintle ezilula kubantwana onokuzenza. Ungabanceda abancinci ukuba benze imizobo yoyilo olulula. Uya kudinga kuphela izihlangu ezimbini kunye neziphawuli ezibomvu neziluhlaza.
Unokwenza uyilo lweetsheri okanye usebenzise umbono wakho kwaye upeyinte eyona uyithandayo. Kwiposi Iislippers ezihonjisiweyo zehlobo uya kuyifumana ividiyo yokuphinda wenze obu bugcisa. Sukuphoswa yiyo!
Iithoyi ezihlaziyiweyo: ifluti yomlingo
Ngamanye amaxesha ezona zinto zokudlala zilula zezona zithandwa ngabantwana ukuba babe nexesha lokuzonwabisa nokonwabisa. Yimeko ye UMlingo woMlingo, Enye yezinto ezilula ezenziwe ngabantwana onokuzenza kwimizuzu embalwa.
Ukwenza le nto yokudlala ungasebenzisa izinto ezinokuphinda zisetyenziswe onazo ekhaya njengezinye iindiza okanye iindiza zokusela isoda. Kwaye ukuba awunazo, unokuzifumana nakweyiphi na ivenkile enkulu.
Ngaphandle kweendiza uya kuyidinga iteyiphu okanye iteyiphu. Enye inketho yiglue, kodwa ukuba ungakhetha iteyiphu ndiyayincoma kuba iya kuba ngcono ngakumbi, kulula ukuyenza kwaye ikhuseleke. Njengoko ubona, ufuna kuphela izinto ezimbalwa!
Ukuba uthanda ukuphinda usebenzise kwakhona, enye yezinto ezilula zabantwana onokuzenza yile Umgcini wepensile nemisongo yekhadibhodi yephepha langasese onalo ekhaya. Eminye, awuyi kufuna izinto ezininzi ngaphandle kwezinto zokumakisha, isikere, iglu encinci kunye namehlo athile.
Ukuba ufuna ukwazi ukuba ungayenza njani inyathelo lekati elihle ngenyathelo, ungaphoswa ngumyalezo Ikati yomgcini wepensile.
Este Iseti yamakhonkco Enye yezinto ezilula ezenziwe ngabantwana onokuzenza ngezinto onazo ekhaya. Ikhadibhodi encinci, umqulu wekhadibhodi wephepha lasekhitshini, iimakishi kunye neglu ziya kwanela ukwenza lo mdlalo omnandi onokuthi udlale ngawo imidlalo ethile ngaphakathi okanye ngaphandle kwekhaya.
Ngaba ungathanda ukwazi ukuba le seti yamakhonkco yenziwa njani? Jonga iposti Iseti yamakhonkco apho uza kufumana khona imiyalelo eneenkcukacha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla zabantwana » I-15 yezandla ezilula zaBantwana
Izimvo ezi-4 zokuhombisa izindlu zethu ngeHalloween